Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Wiilka mucjisada". Munaasabada Mario Gotze Carhood Plus iyo Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch ah oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, laakiin qaar yar ayaa tixgeliya 'Our Mario Gotze's Bio' taas oo aad u xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Hore
Mario Götze wuxuu ku dhashay maalintii 3rd ee June 1992 ee magaalada Memmingen, Germany. Waxa uu ku dhashay hooyadiis Astrid Götze (oo ah gurigeeda) iyo aabaha Jürgen Götze (oo ah borofisar ka tirsan jaamacada Dortmund ee Tiknoolajiyadda).
Götze waxaa loo keenay guriga Masiixiga ah ee gaarka ah. Isaga iyo walaalkiis Fabian oo ay ku jiraan Felix ayaa ugu yaraan la baray inay ahaadaan kuwo diineed.
Wuxuu ku soo koray magaalada Barian ee magaalada Memmingen, oo ah mid aad u badan oo ku yaal aaga qabashada Bayernshabakada shabakada gobolka. Magaalo oo loo yaqaano in ay jilaan ciyaartoy caruurnimo ah Bayern Munich kormeerayaal. Haysashada saaxiibtinimada caruurnimada ee ciyaareysa kubadda cagta micnaheedu waa inaad ku biirto. Tani waxay aheyd sida ay u bilaabantay dhalinyarta Mario iyo walaalkiis weyn Fabian.
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Bayern Loss
Mario Gotze ayaa si sahlan ku soo galay liiska kooxaha horyaalka Bundesliga Bayern Munich. Waxa uu ku dhashay tijaabooyin dhalinyaro ah, waxaana ay doonayeen inay aqbalaan ka hor inta uusan ku wargelin in aabihiis uu kala soo wareegay.
Markii uu yaraa Mario ahaa lix sano jir, aabihiis, oo u soo jeestay a Professor Jaamac, wuxuu aqbalay shaqada shahaadada jaamacada farsamada ee jaamacada Dortmund.
Labada waalid ayaa isku raacay in Mario Gotze aan laga tegin isagoo ah mid aad u yar. Young Mario waa inuu udiyaar garoobo. Waxa uu raacay waalidiintiisa Dooxada Ruhr oo ka tagay gurigiisa hore.
Heerkan, Bayern luminta ayaa aad u hubaal ah Dortmund helitaanka.
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Soo-koobidda Xirfadaha
Dooxada Ruhr, Mario ayaa sii waday hiwaayadiisa jecel 'Ciyaarta Kubadda Cagta '. Waalidiintiisa ayaa isku qoray isaga iyo walaalkiis weyn ee SC Ronsberg si ay u helaan tayada isku midka ah ee ciyaaraha kubbadda cagta dhalinyarada Bayern lahaa isaga. Labada Mario iyo Fabian ayaa u ciyaaray sanadka 1995 ilaa 1998.
Little Mario iyo Brother Fabian
Little Mario wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu quruxda badan ciyaartoydiisa. Xitaa ka fiican kan walaalkiis ka weyn. Waxa uu soo jiitay daawadayaal soo booqanaya isaga oo muujinaya xirfadaha cajiibka ah ee ka soo horjeeda kuwan ka soo horjeeda sida hoos loogu arkay.
Mario Mario Gotze iyo saaxiibadiisa
Si kastaba ha ahaatee, Mario Balotelli ayaa u wareegay kooxda FC Eintracht Hombruch halkaas oo uu ka soo ciyaaray 1998 ilaa 2001 ka hor inta uusan ugu dhaqaaqin Dortmund.
Götze wuxuu soo saaray barta akadeemiyada dhallinyarada ee Dortmund, markii ugu horeysay ee uu kooxda ku soo biiro isagoo 8 jir ah. Xilligii jiilaalka ee xilli ciyaareedkii 2009-10 ee Bundesliga, tababaraha Dortmund Jürgen Klopp ayaa u soo bandhigay Götze kooxda koowaad.
Halka Klopp ereyadiisa ..."Markii ugu horreysay ee aan arko isaga, waxaan tiriyay maalmaha aan ilaa iyo intii aan ku dhiiri galinayay kooxda ugu sareysa iyada oo aan mas'uuliyad darro aheyn."
Götze ayaa fursad u helay islamarkaana ahaa ciyaaryahan muhiim ah kooxda Dortmund ee horyaalka Bundesliga ku guuleystay xilli ciyaareedkii 2010-11. Waxa uu ahaa wakhti uu sameeyay xiriir iskaashi oo lala yeesho Marco Reus. 23 April April 2013, waxaa lagu dhawaaqay in Götze uu u dhaqaaqay 1 July 2013 Bayern Munich ka dib markii kooxdu ay soo bandhigtay qandaraaskii Götze ee xayiraadda € 37.
Qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa wuxuu sii waday inuu sii wado inuu ku guuleysto Koobka Adduunka ee FIFA 2014 ee Germany. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
Qof kasta oo ku nool qoyska reer Mario waa qof aan khasaare aheyn. Waxay ku dadaalaan inay ka fogaadaan guuldarada ka badan inta ay ku guuleysteen natiijo wanaagsan. Waa qoys ka mid ah ragga sida sawir hoos ku qoran.
Mario Gotze oo ah qoyskiisa
Haatan, waxaan ku siinaynaa faahfaahin kasta oo ka mid ah xubnaha Mario Gotze oo ay ku jiraan hooyadooda.
GABAAN: Dabadeed, Jürgen Götze wuxuu u shaqeyn jiray asal ka sarreeya qoyskiisa. Aabihiisna waa borofisar jarmal ah oo ka shaqeeya macadada qalabka korontada iyo warfaafinta ee jaamacada Jaamacadda Dortmund. Waxa uu helay PhD sannadkii 1990, laba sano ka hor wiilkiisa, Mario Gotze wuxuu ku dhashay.
Laga soo bilaabo 1987 ilaa 1990, wuxuu u shaqeeyaa kaaliye cilmi ah oo ka tirsan Guddoomiyaha Nidaamka Network-ka iyo Xarunta Isgaadhsiinta ee Jaamacada Farsamada ee Munich. Wuxu qabtay dhawr jaamacadood oo kala duwan. Tan iyo markii 1997, Jurgen uu ahaa professor (waaxda tignoolajiyada xogta) ee Kulliyadda Qalabka Tamarta iyo Macluumaadka Tiknoolajiyada ee Jaamacada Dortmund.
Uma qasbin caruurtiisa inuu raaco raadkiisa. Wuxuu u ogolaaday inay raacaan riyadooda si ay u noqdaan waxa ay mar walba rabeen inay noqdaan 'Xirfadleyda Xirfadaha'.
Jürgen Götze waa borofisar jaamacadeed oo macnaheedu yahay in la gaari karo. Lambarka xiriirka waa (+ 49) 231 755-2091.
HOOYO: Astrid Götze waa hooyada Mario Gotze. Waxay tahay guri guri iyo qolka Engine ee qoyskeeda. Astrid waxay mas'uul ka ahayd socodsiinta iyo maamulida gurigeeda. Waxay dhab ahaantii daryeeshey ninkeeda iyo carruurteeda. Riix halkan sawirka Astrid iyo qoyskeeda.
Mario Gotze Hooyo (Astrid) iyo Qoyska
FABIAN GOTZE: Walaalkiisa walaalkiis Fabian hadda waa wakiil lacag la'aan ah xilliga qorista. Waxa uu ka tagay nidaamka dhalinyarada Dortmund ee 2010. Fabian wuxuu ku dhashay 3rd ee June 1990. Fabian iyo Mario sida sawir hoos ku qoran waxay ku dhasheen 2 sannadihii ugu dambeeyey. Fabian wuxuu u muuqdaa mid ka yaraada sawirka hoose.
Brian Friendly-Fabian Gotze (bidix) iyo Mario Gotze (Midig)
FELIX GOTZE: Sidoo kale waqtigii qoraalku, Mario Gotze walaalkiis ka yaraa Felix wuxuu haatan u ciyaarayaa kooxda Bayern Munich ee ka tirsan 19. Wuxuu ka yimid SpVgg Unterhaching. Waxa uu yahay difaac dhexe kaas oo tiriya maaliyada 20. Felix waxay ku dhalatay 11th Maalinta Febraayo 1998. Felix (Sawirka hoose) waa 6 sano ka yar Mario Gotze.
Mario Gotze iyo Kid Brother - Felix Gotze
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Sida uu u arko xirfadaha garoonka dhexdiisa, Mario Gotze wuxuu sidoo kale leeyahay xirfado haween ah. Götze wuxuu xiriir la lahaa qaabka jarmalka Jarmalka Ann-Kathrin Brömmel tan iyo 2012 (laba sano ka hor 2014 World Cup).
Annie Kathrin Brömmel oo ah saaxiibka Mario Gotze
Ann-Kathrin waa a qaabka, heesaha & blogger ee Germany. Waxay qabatay booska 7th ee Jarmalka ee ugu sareeysa ee 10. Heesaheeda ayaa weli ah doorashada koowaad ee Jarmalka Dhallinyarada. Brommel, oo bilaabay inuu wax ka beddelo da'da 16, ayaa noqday mid aad u badan oo la aqoonsan karo ka dib markii saaxiibteed uu ku guuleystay koobkii caalamiga ahaa ee Koobka Adduunka ee 2014 sida hoos ku aragtay.
Mario Gotze iyo Girlfriend Ann-Kathrin Brömmel oo u dabaaldegaya Koobka Adduunka
XIRIIRKII LOO QAADAY CALAAMAD:
Gotze wuxuu gaarsiiyay ciyaartoy dhowr ah oo ay sameeyeen markii uu ku soo laabtay Eva Green oo ku ciyaaray Vesper Lynd ciyaaraha James Bond 2006 iyo filimka 'Casino Royale'. Labada qof ayaa baxsaday laba sano ka hor intaanay kala qaybin.
Mario Gotze xidhiidhkiisa Eva Green - Sheeko aan ka hadlin
Gotze wuxuu mar hore ku riyaaqay guushii saaxiibtinimo ee saaxiibtinimo iyo qoyskiisa, ka hor intii aanu Rihanna ka soo qayb galin, oo sawiradiisa iyo muuqaalkiisa qadka dhexe ku raaxeystay waqti fiican.
Mario Gotze oo ku guuleystay Koobka Adduunka Rihanna
Sida laga soo xigtay Rihanna "Daawashada finalka 2014 Koobka Adduunka wuxuu ahaa waayo-aragnimada ugu badan ee noloshayda oo dhan."
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Arrimaha Caafimaadka
Horaantii Maarso 2017, waxaa la soo sheegay in Götze ay la il daran tahay dhibaatada dheef-shiid kiimikaadka. Sad Mario wuxuu kaliya ku fadhiisan karaa taribuunka waxaana uu daawan karaa kooxdiisa.
Xaaladda caafimaad ayaa markii dambe la ogaadey in ay noqoto miyir-qabatin, murqo muruq oo saameynaya fiilooyinka muruqyada, taas oo micnaheedu yahay inayan si sax ah u shaqaynayn. Caafimaadka Tani waxay mas'uul ka ahayd inay keento daal iyo miisaanka. Xaqiiqdii, cudurkeedu naadir u yahay Mario Gotze oo aan fiicnayn.
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Koobka Aduunka Left Boot museum
Mario Götze ayaa loo isticmaalay inuu gool u dhaliyo finalka Koobka Adduunka ee 2014 isla markiiba loo soo diray matxafka Jarmalka ee Jarmalka ka dib tartankii 2014 World Cup. Mario Gotze, kaaliyaha ayaa go'aansaday inuu soo bandhigo garabka bidix ee Matxafka Jarmalka. "Waa wax cajiib ah sababtoo ah taageerayaal badan oo kubada cagta ah ayaa xiiseynaya kabtan khaas ah" Joachim Löw, Tababaraha madaxa Germany.
Deeq bixiye qarsoodi ah ayaa dalbaday dalabkii ugu badnaa ee laba milyan oo euros ah oo loogu talagalay barnaamijka 'gala' fundraising gala. Waxaa hadda loo isticmaalaa bandhigida matxafka Jarmal ee caanka ah ee ku yaala Dortmund.
Mario Gotze waa guushii Koobka Adduunka: Kabihiisa bidix ee ku yaal Matxafka
Boorsada bidix waxay kor u qaadday in ka badan € € 16,269,471 hal sano oo kaliya ah ee lagu hayo Matxafka. Hoos waxaa ka mid ah Mario oo muujinaya kabaha carruurta jarmalka qaarkood oo kaliya ka hor inta aan loo soo dirin Kiiska Muraayadda Museum.
Mario Gotze waa guushii Koobka Aduunka: Kabaha bidixda ayaa u dabaaldega ardayda Jarmalka
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Wuxuu yahay Wiil Wiil Pretty ah
Qof kastaa wuu ogyahay Gotze inuu u muuqdo muuqaal fiican, xitaa ninkuna naftiisa ayuu u xanuunsanayaa si uu u ilaaliyo muuqaalkiisa, xitaa wuxuu u muuqday joornaalka GQ.
Intii lagu jiray wareysiga GQ wuxuu yiri: "Qof walba waa wax aan micne lahayn. Waxaan jecelahay inaan ilaaliyo muuqaalkayga sida Marco Reus. Laakiin kama fekerayo faahfaahin kasta, ma ahan wax muhiim ah aniga. "
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Saaxiibkiisa ugu fiican
Gotze iyo Reus waxay ahaayeen saaxiibo caruurnimad ah sida ay labadooduba isku soo wada galeen nidaamka dhalinyarada ee Dortmund.
Reus wuxuu seegay Koobka Adduunka sababo la xiriira dhaawac uu ka soo gaaray tababarka, laakiin Gotze ayaa xirtay funaanadii hore ka dib guushii kama dambeysta ee ay ka gaareen Argentina isagoo goolkiisii ​​u dhaliyay kooxdiisa.
Mario Gotze oo u dabaal dagay Reus saaxiibkiisii ​​ugu fiicnaa ee Koobka Aduunka
Mario Gotze Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography' -Dhibaatooyinka Borussia Dortmund
Iyaga oo ku guuleystay Koobka Adduunka ee 2014 ee Jarmalka, Mario Gotze weligiis waxaa loo xasuustaa caro Dortmundtaageerayaasha ka dib markii ay ku andacoodeen inuu u gacan geliyay inay ku biiraan kooxda ay xafiiltamaan Bayern Munich. A Dortmund Taageerada ayaa si dhakhso ah u calaamadeysay Mario oo ah goolhayaha Isku Xiran "Judas Gotze" ee Borussia Dortmund.
Mario Gotze - Markii ugu danbeysay ee kubadda cagta ee Dortmund.
kale Dortmund Taageerayaashu waxay isu soo baxeen inay la midoobaan magaca Götze ee jumladahooda kumbuyuutarrada ah iyagoo soo maraya ama la duubay sida hoos loogu arkay.
Taageerayaasha mar hore waxay muujiyeen jacayl loo qabo Mario Gotze
Tallaabadan ayaa keentay Mario Gotze inuu Dortmund ku soo laabto 2016. Peharbs, wuxuu ku jiraa inuu halkaas joogo weligiis. Waxa uu sidoo kale ka tagi lahaa koox aan la tartameynin mustaqbalka.
Waxaan ku dadaalnaa saxnaanta iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn sheekada carruurnimada Mario Gotze iyo bio qori, nala soo xiriir!
Yooxanaa Kimmich Sheeko Hore ee Sheeko Xeel dheer